September | 2010 | Save Burma
Ban Concerned about NLD Dissolution
WASHINGTON—UN Secretary-General Ban Ki-moon has expressed “concern” over the Burmese military junta’s move to dissolve 10 political parties in the run-up to the November general election.
“The Secretary-General notes with some concern the decision by the Union Election Commission to dissolve 10 political parties prior to the general election, including the National League for Democracy and four others for failing to renew their registration,” Martin Nesirky,aspokesperson for the secretary-general, told reporters at his daily press conference at the UN headquarters in New York on Wednesday.
“He [Ban] further notes that the Union Election Commission has issued campaigning guidelines for the remaining 37 parties to register to contest the elections,” Nesirky said in response toaquestion. The secretary-general once again urges the Burmese authorities to ensure conditions conducive toafully inclusive and participatory electoral process, he said.
Nesirky said thataministerial-level meeting of the Group of Friends of Myanmar is expected to be held in New York on Sept. 27 on the sidelines of the UN General Assembly. Details of the meeting are still being worked out, he said.
Responding toaquestion about the role of the UN Good Offices, Nesirky said the developments in Burma are being closely monitored by the team of officials in New York.
The UN spokesman added that Ban has expressed his frustration concerning access to the Burmese authorities.
Meanwhile, an eminent American scholar on Asian affairs on Wednesday warned the international community that they would be committingamistake if they focus on encouraging the military junta to hold free and fair elections in November.
“The central focus of the international community should not be free and fair elections,” said David Williams, the John S. Hastings professor of law at Maurer School of Law, Indiana University, and director of the Center for Constitutional Democracy.
“Instead, it should be seeking ways to encourage the Burmese government—both the military, which will still hold real power after the election, and the new civilian office-holders—to undertake sustained dialogue with all of the country’s stakeholders, especially its ethnic minorities,” he said.
Williams said that the Burmese military junta has ensured that its hand-picked candidates will win in November by imposing restrictions on opponents, including expensive filing fees, tight deadlines and limits on who can be on the ballot.
While the elections may produceacivilian government, the constitution allows the military to declareastate of emergency, dissolve the government and seize power legally, he said, adding that even if the civilian government has real authority, that would not address the ethnic divisions that lie at the heart of Burma’s decades-old civil war.
“The only path to true change for Burma—trilateral dialogue among the government, the democratic opposition and the minorities that have been fighting forameasure of self-determination,” Williams said.
Tagged with Ban Ki-moon, NLD
ပဲခူးမှ အရပ်သားလူငယ်များကို စစ်တပ်မှ ပစ်သတ်မှုအတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ ပေးစာ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ ပေးစာကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုကို လိုလားသော တပ်မတော်သားများ သိစေရန်
မတရား ဖိနှိပ်ခံနေရသော ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး သိစေရန် တတ်နိုင်သမျှ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ချိပေးစေလိုပါသည်။
ဤစာကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ယနေ့ (၁ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ)နေ့ ညနေ (၃) နာရီခွဲခန့်တွင် တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံး၏ စာတိုက်ပုံးထဲသို့ ထည့်၍ မြန်မာသံအမတ်ကြီး မှတဆင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။
ပြည်သူတရပ်လုံး နိုင်ငံရေး နိုးကြားလာအောင် ကြိုးပမ်းကြပါစို့။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကောင်စီ
စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်၊ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်
အကြောင်းအရာ ။ ။ ပဲခူးမြို့တွင် တပ်မတော်သားအချို့က ဥပဒေမဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် အရပ်သား လူငယ်နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်မှ အဖြစ်မှန်ကို တရား ဥပဒေအတိုင်း ဖော်ထုတ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် အလေးအနက် တောင်းဆိုခြင်း။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်ည သန်းခေါင်ယံတွင် ပဲခူးမြို့တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော်သား များနှင့် အရပ်သားလူငယ်အချို့အကြား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု၌ တပ်မတော်သားများက လက်နက်အားကိုး ဖြင့် ဥပဒေမဲ့ ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အောင်သူဟိန်း (၂၂နှစ်) နှင့် စိုးပိုင်ဇော် (၁၈နှစ်)တို့ နှစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားနေသော ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ကို ကြားသိရသည့်အတွက် လွန်စွာ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရသည်။ ဤကိစ္စမျိုးသည် လုံးဝ လက်မခံသင့်သောကိစ္စ၊ နောက်နောင် မဖြစ်သင့်သောကိစ္စ ဖြစ်သည့်အပြင် နောက်နောင် မဖြစ်အောင် ကြိုတင် ကာကွယ်သင့်သောကိစ္စလည်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်က စွဲမြဲစွာယုံကြည်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်သားအချို့က စစ်တပ် အရှိန်အဝါသုံး၍ လက်နက်အားကိုးဖြင့် ပြည်သူလူထုအား အနိုင်ကျင့်နေသည်ကို ဤအဖြစ်အပျက်က ကောင်းစွာ မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူလူထုအား ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ထိခိုက် စေခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သမာသမတ်ကျစွာ ကျင်းပနိုင်ရန် နှစ်လတာ မျှသာ လိုတော့သော အချိန်အခါမျိုး ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလိုက်သည်။
ပြည်သူလူထု၏အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့် တပ်မတော်သည် ယခုအခါ တပ်မတော်၏ စစ်စည်းကမ်းများကိုပင် ဖောက်ဖျက်လျက် ပြည်သူလူထုအား စစ်မြေပြင်မှ ရန်သူပမာ သတ်ဖြတ်ရဲသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသည်မှာ တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတွင် လုံးဝ တာဝန်ရှိသည်။
တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေလျင်တပ်ရင်းအမှတ် ၅၉ မှ တပ်မတော်သားအချို့၏ ယခုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်သည် နိုင်ငံတကာ ဂျီနီဗာ သဘောတူညီမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုလည်း အတိအလင်း ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက် အခြေအနေမှန်ကို ပြည်သူသို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြန် ရှင်းလင်း ကြေညာရန်နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့က အလေးအနက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Download PDF – Letter to Gen Than Shwe
Posted in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Tagged with စိုးပိုင်ဇော်, ပဲခူး, ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ, သန်းရွှေ, အောင်သူဟိန်း
Source – http://2010ebc.wordpress.com/
Posted in လှုပ်ရှားမှု
မိုးထဲလေထဲ အတားအဆီးများကြားထဲက ဂျပန်ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတို့၏ ဒုတိယနေ့ တရုတ်သံရုံးရှေ့ ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
မိုးထဲလေထဲ အတားအဆီးများကြားထဲက ဂျပန်ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတို့၏ ဒုတိယနေ့ တရုတ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အား ကန့်ကွက်သည့် ယနေ့ စက်တင်ဘာလ (၈)ရက် ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွင် အလွန် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာချနေသည့် ကြားထဲက ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတို့မှ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်သံရုံးသို့ ညနေ ၃ နာရီမှစ၍ ၄ နာရီထိ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ဂျပန်ရဲများက သံရုံး လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူပေးရမြဲ ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ဆန္ဒပြခွင့် ရှိပြီး ဆန္ဒပြမည့်နေရာကို ဂျပန်ရဲနှင့် ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ထားရသည်။
သို့သော် ယနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ဆန္ဒပြရာတွင် ဂျပန်ရဲများ၏ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူပုံမှာ ယခင်အခါများကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ဖြစ်နေသည်။ ဆန္ဒပြရန် ရဲနှင့် ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သည့် တရုတ်သံရုံးကို မြင်နိုင်လောက်သောနေရာကိုပင် ယနေ့တာဝန်ကျ ဂျပန်ရဲများက ခွင့်မပြုသည့် အဖြစ်မျိုးကို ထူးဆန်းစွာ ကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် လုံခြုံရေးရဲ အင်အားကို အရေအတွက် တိုးချဲ့ချထားသည်သာမက တရုတ်သံရုံးသို့ မသွားနိုင်အောင် မီတာ(၃ဝဝ) အကွာအဝေးမှ ကြိုတင် ပိတ်ဆို့ထားသည်ကိုလည်း ကြုံခဲ့ရပြန်သည်။
မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများဘက်မှ တာဝန်ရှိသူတို့က တရုတ်သံရုံးကို မြင်နိုင်လောက်သည့် ညှိနှိုင်းထားပြီး နေရာကိုသာ သွားရောက် ဆန္ဒပြလိုကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ဂျပန် လုံခြုံရေး ရဲများက ခွင့််မပြုပဲ အင်အားသုံး ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်။
လုံခြုံရေး တာဝန်ကျ ရဲတို့က မည်သို့ပင် တားဆီးပိတ်ဆို့စေကာမူ မြန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတို့က အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ တရုတ်ပြည် ခရီးစဉ်အား ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲကို မိုးသည်းသည်းထဲ မှာပင် အားတက်သရော ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင်ထံသို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသည့် စာတစောင်ကို မရရအောင် ပေးပို့နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယနှင့် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့် ယနေ့လှုပ်ရှားမှုတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ခေတ္တသီတင်းသုံးနေသော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှ သံဃာ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် အရှင်ထာဝရလည်း အချိန်မီ ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ Myo San Oo(BDA)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင်ထံ ပေးပို့လိုက်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာကို သီးခြားဖော်ပြပါမည်။
Video (You tube) – http://www.youtube.com/maungwto#p/u/0/5H1948Kt8EI
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရ အား ဆက်လက် အားပေး ကူညီခြင်း မပြုရန်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် နိုင်ငံတကာနှင့်အတူ လက်တွဲ၍ စစ်အစိုးရအား ဖိအားပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲ
From: maungwto | September 08, 2010
အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်အား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ တိုကျို တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ လှုပ်ရှား (၇-၉-၂ဝ၁ဝ)
တိုကျိုရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည့် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် လှုပ်ရှားမှု (၇-၉-၂ဝ၁ဝ)
နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်သည့် ခရီးစဉ်အား ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ လှုပ်ရှားမှုတခုကို ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီ (ဂျပန်) မှ တိုကျိုမြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် ညနေ ၃း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပရခြင်းမှာ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သည် ၎င်း၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် တရားမျှတမှု မရှိသည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ရလဒ်အား တရုတ်အစိုးရမှ ထောက်ခံပေးရန်နှင့် အသိအမှတ်ပြု ပေးနိုင်ရေးအတွက်ပါ ကြိုးပမ်းနေသည့် အပြင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အရေးယူမည့် ကိစ္စရပ်များတွေကို အကာအကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် အတွက် ယခုလို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပရကြောင်းကို ကျင်းပရေးတာဝန်ခံ တဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲကို စက်တင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့နှင့် (၈)ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး တရုတ်အစိုးရအား တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသည့် စာတစ်စောင်ကိုလည်း မနက်ဖြန် ဆန္ဒပြ နောက်ဆုံးရက်နေ့တွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီ (ဂျပန်)မှ ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသည့်စာတွင် နအဖ စစ်အစိုးရကို အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ရပ်များနှင့် စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်စေမည့် ပံ့ပိုးကူညီသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရပ်ဆိုင်းပေးရန်အတွက်ပါ ထည့်သွင်း တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
BBC World Service ‘facing Burma axe’
Wednesday, September 8 2010, 11:14 BST
BBC World Service could face major budget cuts that would force its withdrawal from Burma and several other countries, it has emerged.
The Foreign Office, which funds the World Service via an annual £272 million grant, has informed executives to prepare for budget cuts of 25% by April 2011, reports The Guardian.
According toadiplomatic source, the BBC’s broadcast service in Myanmar, Burma, is among several services under threat from the cutbacks.
“The Burma office is up for grabs. It isaquestion of costs. It is very expensive and has relatively few listeners,” said the source.
“The ‘human rights’ argument doesn’t hold much sway with the new Foreign Office.”
The World Service presence in Russia, which reaches about 700,000 listeners andafurther 1m online, could also be vulnerable to the cuts.
The BBC has confirmed that it is in talks with the Foreign Office about the budget plans, which are part of wider cuts across public sector spending. However, the corporation stressed that no final decisions have yet been made.
A Foreign Office spokesman also confirmed that discussions were being held, but declined to offer any details on the proposed cutbacks.
The outcome of the consultation will be known on October 20, when chancellor George Osborne outlines the scale of the government’s spending cuts.
The BBC service in Myanmar, which started broadcasting 70 years ago, has coveredavariety of major changes in Burma, including war, independence and military rule.
Around 23% of the country’s adult population listens to the service, which is broadcast for an houraday from bases in London and Bangkok, Thailand.
David Miliband, Labour’s foreign affairs spokesman, said that ending the BBC broadcasts in Myanmar could play into the hands of the country’s military rulers.
“The World Service isasteady, credible voice in parts of the world where the only other messages blend threats and propaganda,” he said.
“Scrapping the World Service in Burma would beagift to the military junta, and an insult to political prisoners locked in Burma’s jail for no crime.”
Inastatement,aWorld Service spokesman said: “Like all publicly funded bodies, we have been asked to consider the likely impact of significant funding cuts and applying them toawide range of scenarios.
“It is important to note that no decisions have been made; and we will discuss any confirmed impact on our services with staff first.
“We will continue to argue confidently that the BBC World Service is one of Britain’s most effective and vital assets in the global arena; particularly atatime when other governments are increasing, not reducing, their own investments in international broadcasting.”
Tagged with BBC Burmese
Unknown Source via email
နေမင်းသူရ (တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတဦး) / ၀၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မယ့်အကြောင်းကို နအဖစစ်အစိုးရက ကြေညာသွားခဲ့ပါပြီ။ လမ်းပြမြေပုံ နောက်ဆုံးအဆင့်တခုဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာ ရေရှည် နေရာဖယ်မပေးစတမ်း အာဏာကို ရယူသွားမယ့် စစ်အုပ်စုရဲ့ ပွဲသိမ်းကောင်း ဇာတ်လမ်းတပုဒ် မဟုတ်သလို ပြည်သူ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအတွက်လည်း လမ်းဆုံး အဆုံးသတ် နိဂုံးတခု မဟုတ်ပြန် ပါဘူး။ ဖြစ်ထွန်းလာမယ့် လမ်းစသစ်ပေါင်းများစွာအတွက် ခြေဆင်းတီးလုံးတခု၊ စစ်တုရင်စကားအရ အဖွင့်ရွှေ့ကွက်တခု သက်သက်မျှပါ။
စစ်အုပ်စုအတွင်း မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကြားကနေ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို နအဖတို့ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများထင်ထားကြသလို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ကနိုင်မှာပါပဲ။ ကန့်ကွက်တားဆီးနေလို့လည်း မထူးပါဘူး၊ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် မဲသာ ထည့်ပေးလိုက်ဆိုတာ အဆိုးမြင်သက်သက်တွေပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ဘက်က အခြေအနေတွေ ကောင်းနေလွန်းလို့ ပိုင်နိုင်လောက်ပြီ ထင်မှတ်လို့ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်ကို နေ့ကောင်းရက်သာရွေးပြီး ကြေညာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ပါတီတိုင်းအတွက် အချိန်မလောက်မင၊ စည်ရုံးရေးဆင်းဖို့ နှောင့်နှေး၊ ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ ဖြစ်စေပြီး ကြံ့ဖွံ့တဖွဲ့တည်း တဖက်သတ်အနိုင်ရအောင် အချိန်ကိုက် တက်သုတ်ရိုက် ကြေညာသွားခဲ့တာကိုပဲ ကြည့်ပါ။
ခရာမတုတ်ခင် ကြိုတင်ပြေးခွင့်ရနေတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့ အခုမှ ပါတီဝင် စာရင်းတင်၊ နယ်လှည့်စည်းရုံးခွင့် လျှောက်နေရတဲ့ ပါတီငယ်များအကြား အခြေအနေဟာ မိုးနဲ့မြေပါ။ နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ပြန်မပေးစတမ်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက် မှတ်ပုံတင်ကြေး (၅) သိန်းဆိုတဲ့ ငွေပမာဏအတွက်ကြောင့်လည်း တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်တာဆိုလို့ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ တစညတို့ (၂) ပါတီသာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ တဖက်စောင်းနင်း ရွေးကောက်ပွဲကြီးနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာ့အလယ် မျက်နှာပန်း မသာတဲ့ ရှေ့ခရီးကိုဆက်ဖို့ အသည်းအသန် စီစဉ်နေတာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နအဖရဲ့ နိုင်ငံရေး အနေအထားဟာ ခံစစ်အသွင် ရောက်နေတယ်လို့ မှတ်ယူရမှာပါပဲ။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကရတဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေတွေအပြင် ထပ်မံချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ စွမ်းအင်စာချုပ်သစ်များဟာ စစ်ထိပ်သီးအိတ်ကပ်တွေထဲ ၀င်သွားမယ့် (အမျိုးသားထုတ်ကုန် အစုစု ၀င်ငွေမဟုတ်တဲ့) အလဟဿ ငွေတွေသာဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကိုယ့်ဆွေမျိုး၊ နီးစပ်ရာ ကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပြီးသတ်ရသွားစေဖို့ နေပြည်တော်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကိုယ်တိုင် စီမံ ခန့်ခွဲ ပေးတော်မူသော အထူးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး (ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရှိသူကသာ တင်ပြရမယ့် အစီရင်ခံစာမျိုးလို) လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအောင်မြင်ချက် အသေးအမွှားလေးများဟာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလို့ ယူဆလို့မရနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အနုတ်ကိန်းဂဏန်းများပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ကျောင်းသား၊ ရဟန်းသံဃာ၊ တိုင်းရင်းသား အတိုက်အခံ ထောင်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းချထားခြင်းခံနေရဆဲဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ခွင့် မဆိုထားနဲ့ လျှော့ပေါ့ချောင်ချိခွင့် နည်းနည်းလေးတောင် သူတို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့််မို့ အားလုံး ပါဝင်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတရပ်လို့ ကမ္ဘာက အမြဲဝေဖန်ချက်ပေးနေတာပါ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပိုင်နိုင်လောက်မယ်ထင်ရင်ဖြင့် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကြီးဘက်က နိုင်ငံတကာကို မျက်နှာလုပ်ဖို့ရာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံး လွှတ်နှင့်ပြီး ဖြစ်လောက်ရောပေါ့။ စစ်တပ်သာလျှင် အုပ်ချုပ်ရေး စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ အမြဲယုံကြည်နေတဲ့ နအဖတို့အဖို့ အရပ်သားတွေနဲ့ အာဏာကို ခွဲဝေဖို့ ကျင့်သုံးဖို့ နေနေသာသာ လွှတ်တော်ထဲမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း အသားတင် နေရာယူထားတဲ့ သူတို့အပေါ် ပြန်ပြီးဆင်ခြေတက်ခွင့်လေးတောင် ပြုချင်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ အခုတော့ မတတ်သာလို့ နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာပန်းလှအောင် အတိုက်အခံတချို့နဲ့ ရေရှည်တွဲပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အောင့်သက်သက် အလုပ်လုပ်ကြရပါတော့မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းအဖွဲ့တွေအားလုံး၊ တခုတည်းသော စစ်ဦးစီးမှုအောက် ရောက်ရှိရေး ပြဿနာတွေကလည်း တပိုင်းတန်းလန်း မဖြေရှင်းနိုင်သေး၊ နေ့ချင်းညချင်း လက်နက်ကိုင်ပြဿနာ အသစ်တွေလည်း ထပ်ပြီးပေါ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှာ အပြီးသတ် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့အရေး ခေါင်းမာနေသေးဆဲ မွန်၊ ကရင်၊ ၀ နဲ့ ကိုးကန့် တပ်ဖွဲ့များကိစ္စကိုရော နအဖတို့ ဘယ်လိုဆက်ကိုင်တွယ်မှာလဲ။ ၁၉၉၀ လွန် ခုနှစ်တွေကစပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး (၁၇) ဖွဲ့နဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) နီးပါး အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားခဲ့တောင် တိုင်းပြည်အတွက် ပြေလည်မယ့်အဖြေ မထွက်တဲ့အပြင် လမ်းစကိုတောင် ရှာမတွေ့သေး ရှိနေဆဲပဲမဟုတ်ပါလား။ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အပြီးသတ် ဖွဲ့စည်းဖို့ လျာထားတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်များ အရေးဟာလည်း ယခင်နှစ်ပေါင်း (၂၀) နီးပါး လက်နက်တွေကိုင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်တွေရနေတဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကို နာမည်တမျိုး (သို့) အသွင်သစ်တခုနဲ့ ကာလတခုအထိ ဆက်တည်ရှိနေစေဦးမှာပါ။
တပ်မတော်လက်အောက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့လို့ အမည်ခံခိုင်း၊ ယူနီဖောင်း ပြောင်းဝတ်ခိုင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ လစာငွေတွေ ထုတ်ပေးရုံလေးနဲ့ နအဖတပ် လုံးလုံးလျားလျားကြီး ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လတ်တလော ဖွဲ့စည်းပြီးနှင့်တဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းများမှာ ငြိမ်းအဖွဲ့ သူပုန်ဟောင်းတွေက ကိုယ်သေနတ်နဲ့ကိုယ် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် လာပြီးလုပ်နေရခြင်းဟာ မဆီမလျော် သဘာဝမကျလှတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုပါ။
ကွပ်ကဲမှု တခုတည်းအောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတောင် အခွင့်အရေးနဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ ကွာခြားလွန်းလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BDR) တပ်နဲ့ ဘင်္ဂလားကြည်းတပ်တို့အကြား တင်းမာပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၅-၂၇) ရက်အတွင်း တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ အောက်ခြေထု မထောက်ခံတဲ့ စစ်တပ်ဘက်က ပြောင်းရွှေ့လာသူ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှူးကြီး အပါအ၀င် အရာရှိပေါင်း (၆၃) ဦး သေဆုံးပြီး ကျန် (၇၂) ဦးက ကနေ့အထိတိုင် ပစ်ခတ် ပေါက်ကွဲမှုများ အတွင်း ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်များကို နအဖတို့ နမူနာ ယူသင့်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ နေခိုင်းပြီး လစဉ် ရိက္ခာ/လစာ ထုတ်ပေးရုံကလွဲလို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကို အခုအထိ အမိန့်၊ တာဝန်တွေပေး စစ်ဆင်ရေးဝင်ခိုင်းလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှာ ပူးတွဲပေးထားတဲ့ နအဖအရာရှိ၊ အရာခံတွေတောင် တဖြည်းဖြည်း အကျင့်ပျက်လို့ လာနေပါပြီ။ သဘာဝချင်းမတူတဲ့ တပ် (၂) ခု ကို စုစည်းပေါင်းစပ်ထားတာမို့ စစ်တပ်က လာတဲ့ လူတွေနဲ့ သူပုန်ဟောင်းများအကြားမှာ အမြင်ချင်းလည်း မတူညီကြပါဘူး။ တခုတည်းသော တပ်မတော်အဆင့်ထိဖြစ်လာအောင် ဘယ်လောက် အချိန်ထပ်ယူရဦးမှာလဲ။
ဒီအတောအတွင်း နယ်ခြားစောင့်က တပ်ပြေး ဘက်ပြောင်း စတဲ့ကိစ္စတွေ အများကြီး။ အချင်းချင်းကြား မကျေလည်မှုတွေကြောင့် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်များအကြား လုပ်ကြံ ဖျက်ဆီးမှုတွေ တသီကြီး ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အပြင် လက်သည်မဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေလည်း တစတစ ခပ်စိပ်စိပ် ဖြစ်ပွားနေဆဲပါ။ စုဖွဲ့မှုကောင်းပြီး ထုထည်ကြီးမားနေတဲ့ ရန်သူကို ပြန့်ကျဲသွားအောင်လုပ်၊ ချေမှုန်းပစ်တဲ့ စစ်ရေးနည်းပရိယာယ်အတိုင်း ပြည်တွင်းသူပုန်ဟောင်းများအပေါ်မှာ ကျင့်သုံးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းမှသာ ပြေလည်သွားမယ့် ကိစ္စတရပ်ပါ။ အခုတော့ ထာဝရငြိ်မ်းချမ်းတဲ့ လမ်းစမရှာဖွေဘဲ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ကြီးကနေ ပြန့်ကျဲသွားတဲ့ မီးပွားမီးတောက်ငယ်လေးတွေအဖြစ်ကို ရောက်အောင် နအဖတို့ တမင် ဖန်းတီးခဲ့ကြပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်အားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ လက်ဝေခံတွေဆီ လွှဲအပ်ထားနှင့်ပြီး ဖြစ်သလို ပြည်တွင်းက ကုန်သည်၊ ပွဲစားနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ငယ်များ၊ အလတ်လွှာများ၊ ၀န်ထမ်းများ အပါအ၀င် လူထုတရပ်လုံးရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်ဟာ ချွတ်ခြုံကျ၊ ရောင်းချပေါင်နှံပြီး ရင်းနှီးစရာမဲ့၊ နေ့ပြန်တိုး၊ မတ်တိုး (ချေးငွေတသောင်းမှာ နေ့တိုင်း တထောင်နှုန်း လေးဆနီးပါး တလအတွင်း ပြန်အတိုးဆပ်နေရတဲ့စနစ်) များအကြား နေ့စဉ် အကြွေးနွံ နစ်နေကြတဲ့အဖြစ်နဲ့ ရှုပ်ထွေးလှသော လူမှုစီးပွားပြဿနာများ၊ မပြေလည်တဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကြောင့် အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည်များကိုသာမက ကမ္ဘာအနှံ့ အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေဖို့ ထွက်ခွာနေကြဆဲ မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိစ္စ ဖြေရှင်းပေးရေး၊ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားပေးရေး … စတဲ့ ပြဿနာတွေကလည်း နအဖတို့အတွက် တသီတတန်းကြီး ရှိနေတုန်းပါ။
အာဏာအလွှဲအပြောင်းမတိုင်မီ ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရေးအတွက် တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့ အတော်များများ ဆူပူဆန္ဒပြနေတာ၊ တိုးတိုးပြီး အမှုစွဲဆို တင်ပြလာနေတဲ့ လယ်သိမ်းခံ လယ်သမားများနဲ့ ကလေးစစ်သားများ ပြဿနာ၊ အလုပ်သမားအရေး၊ ပင်စင်စား ၀န်ထမ်းဟောင်းများရဲ့ ခံစားခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများ … စသည်ဖြင့် အမှုပေါင်းစုံဟာ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီပြဿနာများကို ဆက်ပြီး ခေါင်းခံဖြေရှင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့် လူတန်းစား လူ့အလွှာပေါင်းစုံဟာ နအဖတို့ဆီမှာ အခုကတည်းကိုက စဉ်ဆက်မပြတ် တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေကြခြင်းပါ။
ဒီကိစ္စတွေထက် အရေးကြီးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေက နအဖတို့ စစ်အုပ်စုအတွင်း ပြဿနာများပဲ ဖြစ်တယ်။ နောင်လာမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ သမ္မတဟာ နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်ပြီး အာဏာခွဲဝေမှု အပိုင်းမှာတော့ တပ်ကို ကိုင်ထားသူ စစ်ဦးစီးချုပ်သာလျှင် ပိုအခရာ ကျပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးထဲမှာ ဒီကိစ္စကို ထည့်ပြီး ရေးဆွဲ ထားမိခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ သူ့အနေနဲ့ တပ်ကို ဆက်ကိုင်မှာလား၊ သမ္မတပဲ သွားလုပ်မလား။ သမ္မတ တက်လုပ်မယ်ဆိုရင် တပ်ကို ဘယ်သူ့လက်ထဲ စိတ်ချလက်ချ အပ်ထားခဲ့ရမလဲ။ သူကိုယ်တိုင် အလုံးစုံ ယုံကြည်ရသူကရော ဘယ်သူရှိနိုင်မလဲ။ ဒီတနေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းကို ပွဲထုတ်ပြီး နောင်တနေ့မှာ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေကို ပစားပေး၊ နောက်တနေ့မှာကျတော့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကို သူကောင်းပြု … စတဲ့ တပ်တွင်း သွေးခွဲအုပ်ချုပ်နေခြင်းဟာ တပ်ချုပ်ကြီးက ဘယ်သူကိုမှ အကြွင်းမဲ့ မယုံကြည်ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ်။
တပ်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ တပ်တွေကိုပဲ နောက်ကွယ်ကနေ ဆက်ကိုင်နေချင်သေးသပဆိုရင်ဖြင့် ဘယ်သူ့ကို သမ္မတ ခန့်ထားမှာလဲ။ ဖြစ်လာမယ့် သမ္မတနဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ အကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆက်စပ်လို့ မရခဲ့ရင် တပ်မတော်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ ‘သို့လော သို့လော’ ပြဿနာတွေဟာ နအဖအတွက် ဖြန့်ထွက်စဉ်းစား တွေးတောစရာတွေပါ။ ပြောရရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အုပ်စုအတွက် ပွဲသိမ်းကောင်း အောင်ပွဲတခု မဟုတ်နိုင်သလို လောလောဆယ်ရော နောင်အတွက်ပါ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိသေးတဲ့ အောင်ပွဲသက်သက်ပါ။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာ သူတို့ရေးဆွဲမိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ကိုယ်ပဲ ပြန်ပြီး ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေပါ။ အာဏာလောဘဇောကြောင့် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြား နိုင်ငံရေးအရ အမြင်တွေ မကွဲသော်လည်း၊ စည်းလုံးမှုအပိုင်းမှာ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် တပ်တွင်း အချင်းချင်း သွေးကွဲသွားစေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အထင်အရှား ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲတောင် မ၀င်ရသေးဘူး၊ ဘောင်းဘီချွတ်ခံရမယ့် ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ အောက်ခြေ ဒု-ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ အကြား ပူညံပူညံ အသံတွေက ထွက်ပေါ်လာနေပါပြီ။ ပိုလျှံနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေအပြင် အမည်ခံရုံသက်သက်၊ ကြံဖန်ရာထူးပေးဖို့ ထွင်ထားတဲ့ (ကစထ) မှူးလို အဆင့်အတန်းတွေ၊ စစ်ဘက်ကနေ အရပ်ဘက် တိုက်ရိုက်သွားပြီး ရာထူးကြီးတွေရစေမယ့် ၀န်ကြီး၊ ညွှန်ချုပ်နဲ့ သံရုံး တာဝန်ခံ၊ စစ်သံမှူး … စတဲ့ အခွင့်အရေး ရာထူးမျိုးတွေကို စစ်ထိပ်သီးများအဖို့ နောင် မျှော်မှန်းနိုင်ခွင့် ရှိပါ့မလား။
လတ်တလော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလတခုအတွက် အခုလိုမျိုး ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့်တွေ လျာထားပြီး ထုတ်ပစ်လိုက်တာသာမဟုတ်၊ နောင်တကြိမ် လာဦးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ အရန်အဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲ ထည့်ဖွဲ့စည်းဖို့ နောက်ထပ် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒု-ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေ အများကြီး တပ်ထဲက ထပ်ထုတ်နုတ်ဖို့ ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ကိုယ်စားပြုပြီး အခုရော နောင်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ၀င်ရွေးခဲ့မိလို့ အရွေးမခံရဘဲ ပြုတ်သွားခဲ့ရင် လက်ရှိရနေတဲ့ လစာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေအပြင် ကား/အိမ် စတဲ့ အဆောင်အယောင်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးမယ့်ကိန်းမျိုး (သို့) ရှုံးမယ့်မြင်းကို လောင်းမိတဲ့အဖြစ်မျိုး လက်ရှိ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ စတင်တွေ့ကြုံ ခံစားနေကြပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်တွေလည်း မျက်ခုံးလှုပ်၊ ရင်ထုပြီး ဆို့နင့်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကြုံနေကြရကုန်ပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အားနည်းချက် လစ်ဟာကွက်တွေကို ကြားဖြတ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် အတင်းအဓမ္မလိုက်ပြီး အာဏာစက်နဲ့ ပိတ်ဆို့ ကာကွယ်ပေးနေရဆဲ၊ တုတ်ပြ ဓားမိုး ထောင်နဲ့ ခြိမ်းခြောက် … စတဲ့ နည်းမျိုးစုံ ကျင့်သုံးနေရဆဲမို့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ရာ ကြီးကြပ်ပေးမယ့်သူ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တောင် တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်ဝံ့တဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ဘ၀ကို ရောက်နေခဲ့ရပါပြီ။ တင်ပြလာတဲ့ အမတ်လောင်းစာရင်းတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စိစစ်ခွင့်မရှိဘဲ စရဖ (ခေါ်) ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကြားဝင် အကျိုးဆောင် စစ်ဆေးပေးနေကြတာကို ကြည့်ရင် ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင် ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ SP တို့ လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ လွတ်လပ်သန့်ရှင်းမျှတမှုဆိုတာဟာ ဘယ်လိုအရာမျိုးပါလိမ့်။
လမ်းညွှန်မြေပုံ (၇) ချက်အရ (၁၃) နှစ်ကြာ ဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုပဲ လိုရာတွေ ဆွဲထည့်ရင်း ရှေ့နောက် မဆီမလျော်တွေဖြစ်၊ ဒါတွေကို ကြီးကြပ်အကောင်အထည် ဖော်ပေးဖို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရုပ်ပြသက်သက်၊ အာဏာနဲ့သိက္ခာမရှိ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကြားဖြတ် အစိုးရတရပ်မရှိလို့ တည်ဆဲ နအဖအစိုးရ ကိုယ်တိုင် ကြားဝင်ပြန်ပါတော့လည်း ဘက်လိုက်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ ကမ္ဘာက ပြောတာခံနေကြရပါပြီ။ အဓမ္မနည်း၊ ညစ်နည်း၊ လိမ်နည်းများ အစုံစုံနဲ့ နအဖတို့က ရွေးကောက်ပွဲရှေ့ခရီးကို ဆက်ကြပါလိမ့်ဦးမယ်။
စစ်တပ်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အရာရာကို တရားမျှတမှုထက် အနိုင်ရဖို့သာ အဓိက ထားတတ်ကြပါတယ်။ ရေဘူးပေါက်တာ မလို၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်လို့ နအဖတပ်ထဲမှာ အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမူအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး၊ အထက်ကို လိမ်ညာတင်ပြပြီး အလုပ်ဖြစ်နေကြတဲ့ တပ်မတော်ထဲမှာလို ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ်မှာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီသစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အောင်မြင်ပါကြောင်း လ်ိမ်လည်စာရင်းပြလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိ တည်ဆဲ အစိုးရဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီး အနာဂတ်မှာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးတရပ် ဖော်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြွေးကြော်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နအဖတပ်မတော်ကြီးရဲ့ ကျင့်သုံးနေကျ ခေါက်ရိုးကျိုး ထုံးစံများအတိုင်း စည်းစနစ်ကျကျ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းမလုပ်ဘဲ ဘူးပေါက်နဲ့ ဖြစ်အောင်ခပ်လာတဲ့ ရေတိုင်းဟာ သုံးလို့မကောင်းတဲ့ ရေဆိုးများသာ ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ။
US Government Adds4Military-Connected Entities In Burma To Entity List And Sanctions 22 Burmese Individuals - JD Supra July 27, 2021
Fighting Myanmar's regime with compassion and military skills - Nikkei Asia July 31, 2021
Six months after Myanmar coup, battle for diplomatic recognition - Al Jazeera English August 1, 2021
Myanmar: Covid-19 surges unchecked, overwhelming shattered healthcare system - Amnesty International July 30, 2021
Poverty in Myanmar will double by 2022, following the military coup and COVID-19 - Fortune July 26, 2021
Quake info: Strong mag. 5.5 earthquake - 41 km north of Shwebo, Sagaing Region, Myanmar (Burma), on 29 Jul 3:09 pm (GMT +6:30) - 81 user experience reports - VolcanoDiscovery July 29, 2021
Russia Emerges as Key Backer of Myanmar’s Military Post-Coup - The Wall Street Journal July 16, 2021
Atrocity Alert No. 261: Myanmar (Burma), Nigeria and Israel and the Occupied Palestinian Territories - Myanmar - ReliefWeb July 15, 2021
Myanmar's political crisis is fuelingaCOVID-19 outbreak - Los Angeles Times July 27, 2021
Pentagon chief: Myanmar military acts 'flatly unacceptable' - Associated Press July 27, 2021
Head of Burmese Military Junta Names Himself Prime Minister - Democracy Now! August 2, 2021
Myanmar: Free Burma Rangers cross rivers, walk up mountains and take shelter in bunkers to deliver aid - Sky News July 9, 2021
Residents: Myanmar leaders use pandemic as political weapon - Associated Press July 30, 2021
Bitter reversal: Myanmar military coup wipes out press freedom gains - CPJ Press Freedom Online July 28, 2021
Myanmar doctors in hiding and hunted by the junta as Covid crisis ravages the country - CNN July 21, 2021
Obituary: Unacknowledged Godfather of Myanmar’s Democracy Movement Dies of COVID-19 - The Irrawaddy News Magazine July 19, 2021
Myanmar: Junta Escalates Media Crackdown - Human Rights Watch July 27, 2021
Myanmar’s Covid surge fuelled by distrust of military junta - Financial Times July 19, 2021
Family of imprisoned American journalist in Myanmar ‘very very concerned’ for his health as Covid levels surge - CNBC July 13, 2021
A Clarkston couple createsahome for Burmese cooking - Atlanta Magazine July 30, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-08-02 13:01 August 2, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-08-02 01:01 August 2, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-08-01 13:01 August 1, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-08-01 01:01 August 1, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-31 13:01 July 31, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-31 01:01 July 31, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-30 13:01 July 30, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-30 01:01 July 30, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-29 13:01 July 29, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-07-29 01:01 July 29, 2021
Africa's most populous city is battling floods and rising seas. It may soon be unlivable August 2, 2021
Hackers block Italian Covid-19 vaccination booking system August 2, 2021
Taliban take over TV station in strategic city as US airstrikes pound key positions in Afghanistan August 2, 2021
Afterpay lets you buy now and pay later. Square just bought it for $29 billion August 2, 2021